Sida loo wadaag Android Screen
> Resource > Android > Sida loo wadaag Android Screen
Play app fantastik ah qalabka Android aad, oo aad rabto inaad saaxiibadaa iyo qoysaska wadaagaan ay shaashadda? Waa wax weyn. Laakiin, sida ay u wadaagaan screen Android? Si aad uga dhigto, ugu horreeya oo dhan, waxaad u baahan tahay in ay qabsadaan screen Android. Haddii weli aad xoqidda madaxiinna oo arrintan ku saabsan, halkan joojiyo. Maqaalkani waxa uu ku saabsan yahay in ay ku tusaan sida loo sameeyo la Wondershare MobileGo for Android ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Tababaraha Tani Android ku siinayaa awood ay ku qabsadaan oo ay wadaagaan Android screens si fudud. Waxaan hubaa in dib markii akhriska, aad fikrad wanaagsan oo ku saabsan wadaaga screen Android yeelan doonaan.
Download MobileGo for Android in ay isku day ah.
Tani waxay qayb ka dib markii uu kuu sheegayaa sida loo la version Windows wadaagi screen on Android - Wondershare MobileGo for Android. Waxaa si buuxda la jaan qaada badan oo telefoonada Android iyo kiniiniyada. Fadlan halkan ka fiiri si aad u hesho more info .
Tallaabooyinka sahal in la sameeyo screen qaybsiga Android
In ay qayb ka socda, l'jeclaan lahaa in uu ku tuso sida loo soo qabto oo la wadaagin screen android. Hadda, rakibi Tababaraha this Android on your computer. Waxaa Launch si aad u hesho suuqa kala xiriir.
Tallaabada 1. Isticmaal cable USB ama WiFi in lagu xiro qalabka Android si aad u PC ah
Si aan ku bilaabo, waxaad u baahan tahay in lagu xiro qalab Android si aad u PC. Here're laba siyaabood oo la heli karo. Waxaad sidoo kale ka dhigi kartaa xidhiidhka ka via cable USB ama via WiFi. Tababaraha Tani Android si deg deg ah lagu ogaan doonaa qalab aad Android. Markaas, aad arki doonaa qalab Android aad muujinaysaa ilaa uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Android screen share
Sida aad ka arki, telefoonka Android ama kiniin muujinaysaa ilaa uu furmo suuqa hoose. Waxaa Under waa "Screenshot" button. Fur telefoonka Android ama miiska iyo tubbada icon ah si ay u muujiyaan screen in aad rabto in lagu soo qabto. Guji "Screenshot". Markaas Tababaraha Android si deg deg ah ayaa qaban doona shaashadda hadda aad telefoon Android ama miiska. By default, shaashada la badbaadiyey in .png format. Markaas, caleenta your computer si aad u hesho meel ay u badbaadin shaashada ka.
Haddii aad rabto in lagu soo qabto screen kale Android, waa in aad bedesho screen ku saabsan telefoonka Android ama miiska. Markaas, riix badhanka helid ah. Ka dib markii in, qabsadaan shaashadda mar kale.
Hadda, aad u suurtagashay in ay qabsadaan screen Android. Waa wakhti ay ku sameeyaan qaybsiga screen ku saabsan Android phone ama kiniin ah. Haddii aad rabto inaad la wadaagto aad screen Android inay Facebook, Twitter iyo kuwo kale, saxiixo in websites kuwaas oo iyaga wadaagaan.
Haddii saaxiibadaa ama qolooyin ah sidii aad Android screens oo aad rabto inaad iyaga ku badbaadin ay telefoonka Android ama miiska. Waxay isticmaali kartaa Tababaraha this Android si ay u dajiyaan. Connect saaxiibkaa ama qoysaska phone Android ama kiniin. Ka dib markii uu la ogaado, waxaad riixi kartaa "Sawirro" galeeysid bidix. Markaas, guji "Add" ku darto shaashadda Android in aad saaxiib ama qoysaska phone Android ama miiska.
Daawo video ah. Waxay kuu muujinaysaa sida loo sameeyo qaybsiga screen Android
Download MobileGo for Android si ay u wadaagaan screen Android!
Tababare App Android: 1 Click to rakib Android Apps ka PC for Free
Top 10 Maareeyayaasha SMS Android Waayo, waxaad
Kabsado xiriirada lumay ama la tirtiro, fariimaha qoraalka ah, sawiro, fariimo WhatsApp, files audio, videos, waraaqaha iyo in ka badan.
Top Manager 6 Android Data Si aad ula socoto Isticmaalka Data
Sida loo kala iibsiga xogta ka Sony in BlackBerry
Top 6 Maps Apps u Android inay Waxaad qaado meel kasta oo aad doonaysaa
Top 5 Android Rasuullo in Download
Top Manager File 5 Android Root
Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada tirtiraa Hero HTC
Sida loo Daawo DVD Movies on Android
Sida loo Download Songs From Google Play